Hugawng kachin(Jinghpaw,singpo,jingphosu): KBC, အမှုဆောင် ဆ၇ာမ (၂)ဦးအား မြန်မာ စစ်တပ် မှ မုဒိမ်းကျင့် သတ်
KBC, အမှုဆောင် ဆ၇ာမ (၂)ဦးအား မြန်မာ စစ်တပ် မှ မုဒိမ်းကျင့် သတ်
at 1/21/2015 12:01:00 PM
Burmese army rape
SCHOOL OF RAPE (မုဒိမ်းကျင့်ဖို့လေ့ကျင့်ရာနေရာ) Audio..VOA —click on video link
Post by Christine Pan.
Khin Mgoo shared Christine Pan's video. 32 mins · KBC, အမှုဆောင် ဆ၇ာမ (၂)ဦးအား မြန်မာ စစ်တပ် မှ မုဒိမ်းကျင့် သတ် ========================================== ရှမ်းမြောက် မှုဆယ် ခရိုင်၊ နမ့်တောင်း မြို့ နယ်၊ ကောင်းခါး ရွာတွင် တွင် KBC, ကချင် နှစ်ခြင်း အသင်းတော် မှ ဒေသတွင်း ပညာသင်ကြား ပေးနေ သော ကချင် လူမျိုး ဆရာမ (၂) ဦး အား ယမာန်နေ့ည (၁၉.၁.၂၀၁၅) ရက်နေ့ ည တွင် မြန်မာ စစ်တပ် မှ ပုဒီမ်းကျင့် သတ်ဖြတ် လိုက်ကြာင်း သတင်းရရှိပါသည်။